बिपीको समाजवादी चिन्तन पार्टीले आत्मसात गर्न सकेनः डा. महत « Pahilo News
बिपीको समाजवादी चिन्तन पार्टीले आत्मसात गर्न सकेनः डा. महत
प्रकाशित मिति : 26 October, 2018 3:45 pm
पोखरा, ९ कात्तिक । नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्राकृतिक स्रोतसाधनको समूचित व्यवस्थापनबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन ।
नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय आर्थिक नीति मस्यौदा समितिको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित पार्टीको आर्थिक नीति सुझाव सङ्कलनका लागि प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिका लागि स्रोतसाधनको उपयोग र उद्यमशीलता आवश्यक हुनेमा जोड दिए ।
बिपीको समाजवादी चिन्तन वर्तमानमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै सहमहामन्त्री डा महतले काङ्ग्रेसले त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको बताए । आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार मात्र नभै निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उनले सम्बद्ध सबैको सहकार्यमा आर्थिक विकास सम्भव भएको बताए । वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको नेता महतको आरोप थियो ।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदले नीति र सिद्धान्तबाट विचलित बन्ने प्रवृत्तिले पार्टी कमजोर बन्दै गएको प्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले बिपीको समाजवादी चिन्तनलाई आत्मसात गर्दै उद्यमशीलताको विकास एवं स्रोतसाधनका्े उपयोग गर्न सके आर्थिक विकास सम्भव हुने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारी, धनराज गुरुङ, अर्जुन जोशी, काङ्ग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसी, डा विजन पन्तलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।